”Baarlamankoow xusuusnaada!” – Baarlamanka Somalia oo xilka saaran la xusuusiyey! | Hadalsame Media
Home Maqaallada ”Baarlamankoow xusuusnaada!” – Baarlamanka Somalia oo xilka saaran la xusuusiyey!
(Muqdisho) 27 Maajo 2020 – Baarlamaankow Ciid wanaagsan. Waxaan maqlayaa in aad ku howlan tihiin qaabka ay doorasho u dhici doonto iyo goorta, qofkii Allah gaarsiiyo.
Kuwa sidaas ku doodayaa kama xishoonayaan ee qiil ayayba ka dhiganayaan in ay ku fashilmeen in ay howlaha ayaga kaga beegan doorashada ay qabtaan si ay u dhacdo xilligii la isku ogaa oo ah bisha Nofeembar 2020.
Hadalka ayay qurxinayaan. Waxay leeyihiin doorasho lagama gaaro sidii in aanay ka mid ahayn howshii loo diray afar sano ka hor ee ay tahay War Deg Deg ah oo soo dhacay bartamaha 2020-ka.
Waxaa kale oo aad mooddaa in ay moog yihiin in kuwii ay doorasho kaga adkaadeen ama khiyaamo iyo wax isdaba marin gacan lagu siiyay ay kursiga kaga boobeen ay afar sano sugayeen tartankii uu Dastuurku damaanad qaaday 2020-ka.
Marka aad go’aan gaareyso, meelmarin iyo fulintiisa adiga lagaa rabo laaca keliya lama eego.
Waxaa Qoray: Yuusuf Garaad – Waa wasiirkii hore ee arrimaha dibedda Soomaaliya, danjirihii hore ee Soomaaliya ee QM iyo madaxii hore ee laanta Af-Soomaaliga ee BBC.
Previous articleSAWIRRO: Garoonka Istaadiyo Muqdisho oo meel wanaagsan soo gaarey (Maxaa u harsan?)
Next articleDHACDO DHIILLO LEH: Aabbe gabadhiisa qoorta uga jaray xiriir jacayl dartii & doodda oo gaartey ilaa Baarlamanka + Sawirro